Eziokwu Google - Nchọpụta Organic na idgwọ
Fraịdee, Nọvemba 2, 2012 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Ma ị nwere ekele maka ha ma ọ bụ na ọ masịghị, Google nwere ebe egwuregwu nke ndị ahịa ga-arụ ọrụ. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Wordstream na-etinye ya n'ile anya.
site Ihe omuma nke Google nke oma: Anyị nnyocha maka infographic gụnyere ihe karịrị 2,600 AdWords akaụntụ na efehe AdWords Grader na Q3 2012. Ihe ndekọ na mkpokọta nchịkọta anọchi anya $ 250 nde ke annualized emefu. Anyị nwere akaụntụ na ọtụtụ mmefu; ụfọdụ akụkọ dị obere, na-etinye ihe ruru $ 100 kwa ọnwa na AdWords. Ndị ọzọ buru ibu karịa, ụfọdụ na-etinye ihe ruru nde mmadụ kwa ọnwa na AdWords. Nyocha a lere akaụntụ na ụlọ ọrụ ọ bụla, wee si mba niile ebe Google na-azụ ahịa.
Data maka post blọọgụ a sitere na nkuzi ọhụụ nke Wordstream na Nchịkọta weebụ Google, nke anyị tụlere otu n'ime ọmụmụ kachasị dị na arụmọrụ dị na ntanetị nke Google Ads.
Tags: mgbasa ozi googlegoogle ppcgoogle seogoogle +nyocha ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa Pịasearch engine njikarịchaA
Pinfluencer: Ahịa na Nchịkọta Site na Pin Nzụ
Nov 3, 2012 na 1:32 AM
Thnks maka ihe omuma ihe omuma. Anaghị m atụ anya na weebụsaịtị / ecommerce weebụsaịtị ga-ebu ụzọ. Ihe m na-atụ anya bụ na ecommerce na-ebu ụzọ atụle ụlọ ọrụ njem.